Kuuriyada waqooyi oo tijaabisay 'Gantaal ridda gaaban' - BBC News Somali
Kuuriyada waqooyi oo tijaabisay 'Gantaal ridda gaaban'
Image caption Hoggaamiyaha Kuuriyada waqooyi Kim Jong-un
Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegtay iney Kuuriyada waqooyi ay tijaabisay dhawr gantaal oo ay riddadooda gaaban tahay.
"Gantaalla waxay Piyongyang ku tijaabisay jasiirradda Hodo oo ku taalla bariga dalkaasi" ayuu yiri abaanduulaha ciidamada Kuuriyada Koonfureed.
Tijaabada gantaalka riddada gaaban ee ay maanta sameeysay Piyongyang ayaa lagu sheegay inuu yahay gantaalki ugu horreeyey ee ay Tijaabiso tani iyo 2017-kii.
Bishi horana waxay Piyongyang sheegtay iney tijaabisay waxa ay ugu yeertay "Hub casri ah oo gantaallada haga".
Waana tijaabadi ugu horreysay oo ay Piyongyang marki uu dhacay kulanki ay Veitnam ku yeesheen Hoggaamiyaha Kuuriyada waqooyi Kim Jong-un iyo Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ee heshiis la'aanta ku soo dhammaaday.
Madaxweyna Trump ayaa shirka Hanoi isaga baxay ka hor inta aan la gaarin wakhtigi la soo gabagabeyn lahaa isaga ka bixitaankiisa u sababeeyey inuu Kim Jong-un uu wadahadalladaasi ku soo bandhigay codsi heshiis oo aan xilligaa loo baahneen.
Jasiiradda Hoodo oo ku taallo bariga dalka Kuuriyada Waqooyi waxay Piyongyang marar badan ku tijaabisay gantaallada riddada dheer.
Image caption Khariidad muujineyso